kubobonke Okuninzi 777
umbuzo kubobonke Okuninzi 777
iinyanga 1 kunyaka 9 eyadlulayo #631 by Kevrick25
Ndiyamthanda 777 mega apakishe owenzayo kunye fsx, id uthando ukubona iingxowa ezintsha 777 ekubeni wenza i 777-200LR kuphela. A pack kuba -200ER kunye -300ER kuya kuba mnandi. Ive wafumana kubobonke aba kwenye indawo kodwa VC yabo setup kakhulu ngokubhekiselele lubopha eziphambili.
Ithemba u nga khangela kulo.
iinyanga 1 kunyaka 9 eyadlulayo #636 by Gh0stRider203
Akunzimanga ukutshintsha le VC ... okanye ubuncinane, ngoko ndivayo lol Ndinento 737 kunye moya kunokuba nice and nice VC (nangona nga bayisebenzise lol) kwaye UKUBA kwafuneka ukuba, I okunga swap le VC kwezinye iintaka 2 injini ukuba lowo.
iinyanga 1 kunyaka 9 eyadlulayo #637 by Kevrick25
kakuhle yayo na VC efuna betshintshisa ngaphandle nangona i kwazi ukuba nzima, ive kwenziwa kuzo zonke iintlobo freeware. nje yayo indlela abanye abantu Ukuseta panels ukuvula.
Umzekelo, i-777 Rikoooo yenza isebenzisa zonke shift + # iindibaniso ukuvula iiphaneli eziyimfuneko ezifana phezulu, fmc njl abanye abantu, wozibeka ukuvula i posky util, okwenza nd / pfd enkulu, njl njl kunye dont ukunika nawuphi na kwiqela lenjongo elingaphezulu ukuvula izinto kwi yoko VC ngokwayo ulinganiselwe koko unako cofa. Kodwa, i lula swap eneenkcukacha yazo panel for rikoooo ngayo yenza isebenze okulungileyo.
Plus, i ucinga rikoooo uza kwenza ngcono xa ukupakisha kuzo kwaye yongeza ngakumbi ingqokelela
iinyanga 1 kunyaka 9 eyadlulayo #638 by Gh0stRider203
Ndicinga ukuba ungakwazi ukutshintsha ukuba panel.cfg
iinyanga 1 kunyaka 9 eyadlulayo #639 by Gh0stRider203
Ndiyazi Kuye kwafuneka ukuhlela panel.cfg ukongeza izinto, ezifana GPS. Andiyiboni kutheni ungakwazi nje ukuphinda-hlengisa indlela nokuba yintoni na ...
iinyanga 1 kunyaka 9 eyadlulayo #641 by Kevrick25
Sele kwenziwe konke, i nje weza ukucebisa ukwenza imiqulu ngaphezulu 777, okanye imiqulu unalo 200 kunye 300 kulo kunokuba kuphela 200LR yedwa. Nje ngendlela efanayo pack yakhe A330 kungaba A332 and A333 kaThixo
iinyanga 1 kunyaka 9 eyadlulayo #642 by CSTT-CYYZ
Kwakhona ngathi pack n-2 kunye nomoya France umbala entsha nomoya Canada, KLM umbala entsha, United Airlines, Jal, ANA, Delta, Air Austral, LH umthwalo, B777-300ER KLM - moya Canada Emirates - Egyptair - tam-Swiss -BA - Air transat ficitve. enkosi
Ixesha ukwenza page: 0.394 imizuzwana